Ukuqonda i-R kuCRM | Martech Zone
Ukuqonda i-R in CRM
NgoMsombuluko, Januwari 28, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Bengifunda nje iposi elihle CRM futhi ngicabanga ukuthi kunembobo eyodwa enkulu, enkulu, evulekile ekusetshenzisweni okuningi kweCRM… Ubudlelwano.
Ubuhlobo idinga a izindlela ezimbili zokuxhuma, okuthile okuvame ukushoda kunoma iyiphi i-CRM. Onke ama-CRM amakhulu aphuma emakethe enza umsebenzi omuhle wokuthwebula idatha engenayo - kepha awenzi lutho ukuqedela iluphu. Ngikholwa ukuthi lokhu kungukhiye wokuthi kungani ukusetshenziswa okuningi kweCRM kwehluleka. Futhi ngikholwa ukuthi isixhumanisi esibuthakathaka kuzingxenyekazi eziningi zeCRM.
Ukubheka okukodwa kusesho lweGoogle lwe Ukuphathwa kobudlelwane beKhasimende futhi uzothola ukuthi umthengisi ngamunye uchaza i-CRM ngokuqinile maqondana namandla esoftware yabo. Isibonelo, nakhu Incazelo kaSalesforce:
Incazelo elula, ebanzi ingatholakala egameni: I-CRM iyindlela ebanzi yokuphatha ubudlelwano namakhasimende akho? kufaka phakathi abangaba amakhasimende? ngenzuzo ehlala isikhathi eside neyokubambisana. Ngokuqondile, izinhlelo zesimanje zeCRM zikuvumela ukuthi uthwebule imininingwane ezungeze ukuxhumana kwamakhasimende futhi uyihlanganise nayo yonke imisebenzi ehlobene namakhasimende nephoyinti ledatha.
Hmmm… Ngicabanga ukuthi akuyona into engaqondakali ukuthi ipulatifomu ye-Salesforce igxile ngokuphelele ekubanjweni kwedatha futhi isiphetho sangemuva sinamandla okuhlanganisa aqinile. Ngisacabanga ukuthi yingxenye nje yesixazululo seCRM.
Enye ingxenye yesixazululo ilele ekutheni UXHUMANA kanjani nekhasimende LAKHO. I-CRM yakho kufanele igxile kuzindawo zokubangela ukubikezela, ngokusemandleni akho, izikhathi lapho kufanele wenze khona ebudlelwaneni bakho nekhasimende lakho. Uwathuthukisa kanjani amakhasimende akho ngomjikelo wokuphila wamakhasimende?
Izibonelo Zokusetshenziswa Kwe-CRM Ewusizo
Uma kungumbono, imiphi imikhiqizo noma izinsiza ezabathakazelisa ekuxhumaneni kwakho noma kwiwebhusayithi yakho (ukuhlanganiswa kwezibalo)? Balindele nini ukuthi uzoxhumana nabo futhi? Ingabe unayo izexwayiso ezihlelelwe ukukwazisa ukuthi uzoxhumana nini nazo noma ama-imeyili ahleliwe?
Uma kungumbono noma ikhasimende, ngabe okuqukethwe kwewebhusayithi yakho kuhlinzekela ngamandla imikhiqizo noma izinsizakalo abanikeze intshisekelo kuzo noma ozithengisile? Ngiyacabanga Amazon.com wenza umsebenzi omuhle kakhulu wokuphakamisa izincwadi kimi - kepha abalinaki iqiniso lokuthi ngithenga kulona UBarnes noNoble, futhi. Uma kuhlanganiswe I-Shelfari or I-GoodReads ku-akhawunti yami, bazokwazi engikuthengile futhi ngeke baphinde bangibonise.
Ngabe usungule inani elifanele kumakhasimende akho ongasebenza ngalo? Uma ngisebenzisa izinkulungwane zamadola nawe, ungiphatha kanjani ngokuhlukile kunabantu abangasebenzi? Ngiya esitolo esikhulu sekhofi esiseduze esingikhalela isikhashana isikhathi esiningi lapho ngithola okulingene. Bangazi ngamagama futhi bayabona ukuthi ngibaluleke kakhulu kubo kunekhasimende elivela kanye ngenyanga.
Ngabe usukhombile ukuthi inhlokomo yenzelwa ukuthi abantu bahlale noma bakushiye? Uma umfundi ojwayelekile wencwadi yakho ye-imeyili evula u-5, angalokothi achofoze, bese ezikhipha ohlwini, wenzani okwehlukile kunombolo yezincwadi yesi-5 yomfundi ongakaze achofoze?
Ugcine nini ukubabonga noma ucele impendulo yabo ngensizakalo yakho? Ingabe unayo imibundu yokusebenzisa noma imingcele yomsebenzi esethelwe ukuxhumana namakhasimende asebenzisa i- $ X noma athenge njalo inani le-X lezinsuku, amasonto noma izinyanga?
Ukuhlela, ama-imeyili aqalisiwe, imivuzo, nokuqukethwe okunamandla yizici ezibalulekile KUWE ekulondolozeni ubudlelwano nekhasimende lakho nokubasiza ngomjikelezo wempilo wamakhasimende. Bheka futhi isicelo sakho se-CRM… kukusiza kanjani ukwenza lokho? Akufanele ishiyelwe kuwe ukuthuthukisa konke lokhu kusebenzisana ne-CRM yakho. Uma kunjalo, awunalo uhlelo lweCRM, unedathabheyisi yekhasimende nje.
Izibalo, izinqola zokuthenga, ukumaketha nge-imeyili kanye nezinhlelo zokulawulwa kokuqukethwe kweWebhusayithi kumele konke kuhlanganiswe ukuze ube nokuqaliswa kweCRM okuzozuza ngokuphelele ezindlekweni nasemzameni wokuqala odingekayo ekwakheni ukuqaliswa kweCRM. Uma ungakwenzi xhuma amachashazi, awunaso isisombululo seCRM.
QAPHELA: Lapho ngenza usesho ngezinsizakusebenza zeCRM nomdwebo omuhle kuwebhu, ngithole insiza enkulu, i Uthisha Wezokumaketha.
Tags: CRMubuhlobo bamakhasimendeukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimendelungiselelaukubuyekezwa komkhiqizothola imikhondoubuhloboumklamo ophendulayoinqubo yokuthengisaIsinciphisi
IMass Media to Mass Social Networks = YEKA
Yiziphi Izinjini Zokucinga Ezifundwayo…
Jan 28, 2008 ngo-7: 13 PM
Ngicabanga ngobuqotho ukuthi iningi lezinhlelo zeCRM kufanele zibizwe kangcono ngezinhlelo zePRM ngoba azimayelana nokuphathwa kobudlelwano beKhasimende kepha kunalokho ngeProspect Relationship Management ikakhulukazi lapho singenandaba nobudlelwano obuqhubekayo nanoma ngubani. Iningi lalezi zinhlelo zenzelwe abazingeli ngokungafani nabaqoqi futhi empeleni azifanelekile isu 'lomhlaba futhi landise' elidinga ukwakha ubuhlobo obuhlala isikhathi eside.
Izinhlelo zeCRM zenzelwe ukuphatha amanani amakhulu “amakhasimende” futhi ukwakha ubudlelwano kungenziwa kuphela uma sicabanga ngemizamo egxilile kumanani amancane amakhasimende.
Uqinisile futhi isizathu ukuthi lezi zinhlelo zeCRM azakhelwanga izinjongo ezisetshenziselwa zona.
Jan 29, 2008 ku-3: 46 AM
Mhlawumbe uzobe unembe kakhudlwana uma ubabiza ngokuthi “Izinhlelo Zokulawulwa Kwamathemba", Noma"PMS”Ngamafuphi. UKinda unendandatho eyindida kuyo, cha? '-)
Jan 29, 2008 ku-6: 40 AM
U ushilo, hhayi mina
Jan 29, 2008 ku-3: 31 AM
Amaphuzu amahle. Njengoba kunezinketho eziningi ezilula zokuthi izinkampani ziqale ukuxhumana namakhasimende ngakunye ezingeni elilodwa, akufanele kube nesizathu sokungenzi kanjalo (facebook, blogs, email).
Yonke inkampani isebenzisa i-CRM, ukuyisebenzisa ngempumelelo kakhulu kungaba isiphakamiso senani esinikezwa yinkampani yakho, futhi konke kutholakala kumathiphu akho eminwe.
Jan 29, 2008 ngo-10: 59 PM
Njengoba ngibhloga cishe isikhashana emuva, baningi kakhulu abasebenzisa i-CRM 'ukubamba' amathuba abo kunokwakha ubudlelwano nabo.
Jan 30, 2008 ku-10: 31 AM
Ngabe lezi zingcweti zeCRM azikhumbuli ukuthi kwakunjani ngesikhathi bethandana?
Ingabe akuwona wonke umqondo ngemuva kweCRM ukwakha ubudlelwane obuhlala isikhathi eside? Ngakho-ke, ukugcagca kuze kwaholela nini ebudlelwaneni? Ngisabela kanjani ezinkampanini ezibonisa ukuthi zingakanani 'ezaziyo' ngami? Impela, sala-bye.
Liyini ikhambi? Ngibuze, ungibandakanye, ungithakazelise futhi ungithakazelise, ungimangaze ungenze ngizizwe ngikhethekile. Hawu, kwakunzima lokho.
Kwenzeka kanjani ukuthi izinkampani zingayitholi nje? Ingabe bayesaba ukubuza? Ukwesaba ukwenqatshwa?
Ukudla komcabango: uma ngingenantshisekelo, ngabe ubungeke uthande ukuthola ngaphambi kwesikhathi? Ngakho-ke ungagxila kulabo abanentshisekelo?